Nagu saabsan | Dongguan Missadola technology Co., Ltd.
Shenzhen Missadola technology Co., Ltd. (Dongguan Missadola teknolojiyadda Co., Ltd.) waa shirkad dhoofinta maaskaro / mashiinka rayidka ah oo isku dhafan naqshadeynta wax soo saarka, R&D iyo wax soo saarka. Shirkadda waxay had iyo jeer ilaalinaysaa iskaashiga waxayna isdhaafsanaysaa xarumaha caafimaadka heerka koowaad ee guriga iyo dibadaba, waxayna dhiseysay aqoon-kororsi heer-sare ah 100,000-sano ah kaasoo buuxiyay heerarka shahaado qaran. Waxaan leenahay qalab tayo sare leh, shaqaale xirfad leh, tayo sare leh iyo adeeg wanaagsan. Waxaa si weyn looga wada yaqaan adduunka oo dhan oo leh astaan ​​u gaar ah "1AK" "Dr. Adola". Waxaan u shaqeynaa si hufan oo adag si aan u siino macaamiisha xalka u gaar ah. Rome lama dhisin maalin, waxaan ku hadlaynaa xoog iyo adeeg. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan nala soo xiriir!
Dongguan Missadola technology Co., Ltd. waa shirkad farsamo sare ku takhasustay oo ku takhasustay R&S, soosaarka iyo iibinta qalabka neefsashada ee warshadaha caafimaadka, kuwaas oo ku yaal magaalada Zhongtang, magaalada Dongguan, gobolka Guangdong. Miss Adola & 1AK waa caanka dunida caan ku ah ee neefsashada. Waxyaabaha ugu waaweeyn waxaa ka mid ah: maaskaro ilaalin ah, maaskaro caafimaad, dhar ilaalin ah, maaskaro ilaalin ah, gashado ilaalin ah, gashashyo shaqeynaya, koofiyado ilaalin ah, galoofyada ilaalinta iyo alaabada kale, kuwaas oo si madaxbanaan loo soo saaray, soo saaray oo iibiyay shirkada.
Missadola & 1AK waxay si guul leh ku heshay shahaadada CE, ISO9001, ISO13485, FDA shahaadada, BSI, iyo aqoonsiyo kale. Tayada macnaheedu waa wax walba, Missadola IAK waxay soo bandhigtaa alaabo fiican. Waqtigan xaadirka ah, waxay leedahay dhismaha warshadeed ee caalamiga ah ee GMP, ku dhawaad ​​2000 oo mitir murabac ah 100,000 oo aqoon isweydaarsi hawo nadiif ah, 5000 mitir murabac ah oo fadhiga-bilaashka ah iyo qalab soosaar iyo qalab si buuxda otomaatig ah. Nabdoonaanta iyo badeecadaha u qalma waa siyaasada tayada weligeed ah.
Ka dib sannado dadaallo isdaba joog ah, waxqabadka iibkeenna ayaa sii kordhayay, wax soo saarka sannadlaha ah ee waji-xidhka ilaalinta iyo alaabada kale ayaa gaadhay 50 milyan. Hadda waxaan haynaa 9 khad wax soo saar, iyo waxsoosaarkayaga oo loo dhoofiyo in kabadan 100 macaamiil iyo geeska aduunka oo dhan. Waxaan shirkado ka aasaasnay ​​dalal badan oo ka socda Yurub iyo USA. Himilada Miss Adola waa inay caafimaadka adduunka ilaalisaa alaabadayada. Ku soo dhowow inaad booqato oo aad wadahadal gasho!